Umvelisi waseTshayina weTitanium Alloy Screw, Screws ezinemibala yeTitanium, Izikere zeNtloko zeTitanium
Inkcazo:I-Titanium Alloy Screw,Isikali seTitanium,Imibala yeTitanium enemibala,Izikulufa zeTitanium zentloko,,
Home > Imveliso > Izikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso > Isikali seTitanium
Iintlobo zeMveliso ze- Isikali seTitanium , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Titanium Alloy Screw , Isikali seTitanium ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ixabiso elipheleleyo M3 Round Head Titanium Screws
Yenza i-titanium yentloko enesilinganiselo esincinci esenziwe ngokwezifiso
iqhosha eliphezulu titanium intloko intloko torx cap izikroba
Umgangatho ophezulu we-din 912 hex titanium allen bolt
Ixabiso elinomtsalane ngesithuthuthu
I-DIN7991 M5 M6 M8 titanium countersunk yentloko yesikulufu
Zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw
I-OEM Titanium Bolt eyenziwe ngoSiko eyenziwe yenziwa ngocoselelo oluphezulu
I-Titanium Flat Head One Slot Screws RC Imoto
Ixabiso leMveliso F3 M3 Titanium Hex Socket Screw
Elona xabiso likhulu lezitali zeTitanium
I-M3 iqhosha leTitanium Screw
I-M3 iqhosha leTitanium Screws
Ifektri yexabiso leTitanium Screw ngomgangatho ophezulu
Ukuthengisa okuShushu okwenziwe ngokweTitanium Screws Ngomgangatho ophezulu
Umgangatho Ophezulu weeqhosha zemibala yeTitanium
Umgangatho ophezulu kunye neLightweight M3 yeTitanium
I-M3 ehambelana neTitanium Round Head Screws
I-Anodized M4x12mm titanium iibheringi zendalo
Isiciko seTitanium socket
Ingcaciso yeMveliso Ixabiso elipheleleyo M3 Round Head Titanium Screws I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi kunama-screw aluminium ezibonakalayo. Kodwa umbala wabo awukho...
Packaging: Yenzele okuthile
Yenza i-titanium yentloko enesilinganiselo esincinci esenziwe ngokwezifiso I-Titanium Alloy Screw Fasterner inokusetyenziswa kuyo yonke indawo. I-titanium Screw ingasebenzisa intamo yegitare Ngezikhonkwane ecaleni ngezikhonkwane Titanium isiSwati,...
iqhosha eliphezulu titanium intloko intloko torx cap izikroba I-Titanium Alloy Screw Fasterner inokusetyenziswa kuyo yonke indawo. I-titanium Screw ingasebenzisa intamo yegitare Ngezikhonkwane ecaleni ngezikhonkwane Titanium isiSwati, nathi...
Umgangatho ophezulu we-din 912 hex titanium allen bolt I-Titanium Alloy Screw Fasterner inokusetyenziswa kuyo yonke indawo. I-titanium Screw ingasebenzisa intamo yegitare Ngezikhonkwane ecaleni ngezikhonkwane Titanium isiSwati, nathi...
Ixabiso elinomtsalane ngesithuthuthu I-Titanium Alloy Screw Fasterner inokusetyenziswa kuyo yonke indawo. I-titanium Screw ingasebenzisa intamo yegitare Ngezikhonkwane ecaleni ngezikhonkwane Titanium isiSwati, nathi Elungiselelweyo, nezinto...
I-DIN7991 M5 M6 M8 titanium countersunk yentloko yesikulufu I-Titanium Alloy Screw Fasterner inokusetyenziswa kuyo yonke indawo. I-titanium Screw ingasebenzisa intamo yegitare Ngezikhonkwane ecaleni ngezikhonkwane Titanium isiSwati, nathi...
Zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw Sinezo zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw, imibala yendalo kunye nesilivere. I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi...
I-OEM Titanium Bolt eyenziwe ngoSiko eyenziwe yenziwa ngocoselelo oluphezulu Sinezo zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw, imibala yendalo kunye nesilivere. I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla...
Amandla okubonelela: 20000
I-M3 Titanium Flat Head One Slot Screws yeRC Car I-titanium Flat Screws zizinto ezibalulekileyo kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, njengeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izikali zethu eziqhelekileyo zesitokhwe...
Ixabiso leMveliso F3 M3 Titanium Hex Socket Screw Sinezo zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw, imibala yendalo kunye nesilivere. I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi...
Elona xabiso likhulu lezitali zeTitanium I-Screws zizinto ezingabalulekanga kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iglasi yamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Izikali zethu eziqhelekileyo zesitokhwe zibandakanya i- Titanium...
I-M3 iqhosha leTitanium Screw I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi kunama-screw aluminium ezibonakalayo. Kodwa umbala wabo awukho mibala njengezikrelem ze-aluminium ngenxa...
I-M3 iqhosha leTitanium Screws I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi kunama-screw aluminium ezibonakalayo. Kodwa umbala wabo awukho mibala njengezikrelem ze-aluminium ngenxa...
Ifektri yexabiso leTitanium Screw ngomgangatho ophezulu Sinezo zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw, imibala yendalo kunye nesilivere. I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele...
Ukuthengisa okuShushu okwenziwe ngokweTitanium Screws Ngomgangatho ophezulu I-titanium screws zaziwa kakhulu ngokuba namandla, ukukhanya kunye nokuchasana ne-kutu. Ipropathi enye emi ngaphandle xa ithelekiswa nezinye izikrozo zensimbi kukuba...
Umgangatho Ophezulu weeqhosha zemibala yeTitanium I-titanium Screws zizinto ezingafunekiyo kwimizi mveliso kubomi bemihla ngemihla, ezinje ngeekhamera, iiglasi zamehlo, iiwotshi, zombane njalo njalo. Kwi-Titanium Screws Button Head Titanium Screws ,...
Umgangatho ophezulu kunye neLightweight M3 yeTitanium Ipropathi enye emi ngaphandle xa ithelekiswa nezinye izikrozo zensimbi kukuba izikroba ze-titanium zinamandla aphezulu ukuya kubunzima obuinobunzima obuyi-4.51 g / cm3. Sinezo zonke iintlobo...
Elona xabiso liphezulu M3 elungiselelwe i-Titanium Round Head Screw Sinezo zonke iintlobo zentloko ye-titanium screw, imibala yendalo kunye nesilivere. I-titanium screws zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya kunye namandla aphezulu....
I-M3 Socket Titanium Screw I-titanium screw zinobunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu. Bomelele ngakumbi kune-Aluminium Screw, Titanium Screw, Screwless Steel Screw, iScrew Screw (s), i-Nylon Screw Kodwa umbala wazo awukho mhlophe...
I-Anodized M4x12 titanium ibhedi yendalo Izibonelelo ze-titanium screws zi-Ultra-ukukhanya, i-corrosion-immune, anti-oxidation, i-bio-ehambelana, ubushushu obuphantsi kunye nokumelana nobushushu obuphezulu, imodulus ephantsi ye-elasticity,...
I-Titanium socket yentloko cap isikere soThango I-Titanium Screw isetyenziswa banzi kwimarike yoThintelo, kwaye yande ngakumbi nangakumbi. I-Titanium Fasteners ilula kwaye yomelele kune-aluminium kunye nesinyithi. Ngaphandle kweTitananium Fasteners,...
KwiChina Isikali seTitanium Abaxhasi
I-titanium screws nazo zithandwa kakhulu ngenxa yobunzima bazo bokukhanya kunye namandla aphezulu.Zomelele ngakumbi kune-aluminium impahla yesikere. Kodwa umbala wabo awukho mibala njengezikrelem ze-aluminium ngenxa yokufakelwa kwezinto ze-titanium. Ubungakanani obahlukeneyo, iintlobo kunye nemibala titanium isikrobo sinokunikwa. Amacandelo e-titanium abekwe ngokwezifiso anokunikwa ngokunjalo ngokwemizobo kunye neemfuno zakho. Ukuba ufuna inkonzo yokupakisha okhethekileyo kubandakanya iibhokisi ezikhethekileyo zephakheji, kukulungele nathi. Nawuphi na umbuzo okanye imfuno, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-Titanium Alloy Screw Isikali seTitanium Imibala yeTitanium enemibala Izikulufa zeTitanium zentloko Titanium Alloy Screw